सपनीमा गुड्ने रेल! – AayoMail
सपनीमा गुड्ने रेल!
आयाेमेल संवाददाता २०७७ असार ९ गते ८:५७
जनकपुरभन्दा केही किलोमिटरपूर्व भारत जयनगरमा ‘छुकछुक’ गरेर रेल दौडिरहँदा नेपालीका लागि भने सपनामै सीमित भएको छ।
रेल अब चल्ने, केही दिनभित्रै सञ्चालन हुने यावत् कुरा सुनेर नेपालीले सन्तोष गरिरहनुपरेको छ। भारतको सहयोगमा जनकपुर-जयनगर रेलमार्ग निर्माण सुरु भएसँगै जनकपुरसहित पूर्वीधनुषाका नागरिकमा खुसी छाएको थियो। रेलसेवा सञ्चालन भइसकेपछि भारतबाट मालसमान आयात गर्न सहज हुने यहाँका व्यवसायीको आसा थियो। साथै, बिहारको जयनगरसहित विभिन्न स्थानसम्म पुग्न सहज हुने सोचेका थिए यस क्षेत्रका बासिन्दाले।
पुरानो ‘नारो गेज ट्र्याक’ विस्थापित गरेर ‘ब्रोडगेज ट्र्याक’ मा आधुनिक रेल चलाउने योजनाअनुसार निर्माण पनि सुरु भयो। र, जयनगरदेखि जनकपुरको कुर्थासम्म रेल गुडाउन आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार लगभग तयारी अवस्थामा छ। अहिले त धनुषाको कुर्थाबाट महोत्तरीको बिजलपुरासम्म पनि रेलखण्ड निर्माण सुरु भइसकेको छ। कुर्थादेखि बिजलपुरासम्म लिक बिछ्याउने काम सुरु भएको हो।
जनकपुरदेखि जयनगरसम्म गुडाउन पटकपटक भएको परीक्षण सफल हुँदा यातायात क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारिएको सबैले सोचेका थिए। तर, झन्डै एक वर्षअघि पूर्वाधार तयार भइसक्दा समेत रेल नगुडेपछि जनकपुर-जयनगर रेल सबैको सपनामात्र भएको छ।
चाँडै सञ्चालन हुने भनिए पनि रेल सञ्चालन नहुँदा कतिपयले त आश मारिसकेका छन्। यसअघिका विभागीय मन्त्रीदेखि अधिकारीहरूले दिएको आश्वासन झुटो साबित हुँदै गएपछि रेल चल्ने वा नचल्ने विषयमा जनकपुरवासीले शंका व्यक्त गर्न थालेका छन्।
तर, रेल विभागका साइट इन्जिनियर विनोद ओझा भने ‘लकडाउन’ सकिएलगत्तै जनकपुरदेखि जयनगरसम्म रेल सञ्चालन हुने दाबी गर्छन्। जनकपुरदेखि जयनगरसम्म सञ्चालन गर्न दुई सेट रेल तयार भइसकेको ओझा बताउँछन्।
‘जनकपुर-जयनगर खण्डमा सञ्चालन हुने दुई सेट भारतबाट खरिद भइसकेको छ,’ ओझाले भने, ‘तयार भएर रेल बिहारको सोनपुरसम्म आइपुगेको छ, लकडाउन सकिएलगत्तै सेवा सञ्चालन हुन्छ।’
हजारदेखि १२ सयसम्मले यात्रा गर्न सक्ने गरी प्रतिसेट इन्जिनसहित पाँच-पाँचवटा डब्बासहितको रेल सरकारले भारतबाट खरिद गरेको उनले जानकारी गराए। ‘सुविधासम्पन्न रेल आउँदै छ, एउटा डब्बा एसिजडित हुनेछ,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय प्राविधिक कारणले अपेक्षित समयमा रेल सुरु हुन सकेन। तर, अब चाँडै सुरु हुन्छ।’
रेल सञ्चालन गर्न पूर्वाधारलगायत सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको उनले बताए। ‘जनकपुर-जयनगरसम्म रेल सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी पूरा भइसकेको छ, स्टेसनहरूमा पानीट्यांकी निर्माण कार्य भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यो पनि चाँडै सकिने छ, भारतबाट रेलसेट आएलगत्तै सुरु हुन्छ।’
रेल सञ्चालनमा ढिलाइ हुँदा तयार भइसकेका पूर्वाधार पनि बिग्रन थालेको छ। स्टेसनहरूमा निर्माण भएका भवनका झ्यालढोकाका साथै नटबोल्टसमेत चोरी भएका छन्।
साइट इन्जिनियर ओझा अपेक्षा गरिएको समयमा रेल सञ्चालन हुन नसकेपछि ट्र्याकका साथै स्टेसनमा निर्माण गरिएका भवनको सामान चोरी हुन थालेको बताउँछन्। कतिपय स्थानमा यात्रीलाई बस्न बनाइएका बेन्चहरूको नटबोल्टसमेत चोरी भइसकेको उनको भनाइ छ।
ग्रामीण क्षेत्रका साथै जनकपुर स्टेसनमा समेत सामान चोरी भइरहेको उनले बताए।
नेपाल-भारत विकास साझेदारीअनुसार भारतीय वित्तीय अनुदानमा ३४ किलोमिटर लामो जयनगर-कुर्था ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माण गरिएको छ। कुर्था-जनकपुर-जयनगर रेलमार्गको पुरानो न्यारोगेजलाई विस्थापित गरी ब्रोडगेजको रूपमा विस्तार गरिएको हो। यसैगरी कुर्थादेखि महोत्तरीको बिजलपुरासम्म पनि रेलमार्ग निर्माण कार्य भइरहेको छ। सन् २०१४ देखि रेलमार्ग निर्माण कार्य सुरु भएपछि जनकपुर-जयनगर रेल सेवा ६ वर्षयता बन्द अवस्थामा छ।